Samachar Batika || News from Nepal » सुतेको व्यक्तिले सपना देखिरहेको कसरी थाहा हुन्छ ?
सुतेको व्यक्तिले सपना देखिरहेको कसरी थाहा हुन्छ ?
यसै चरणमा सपना देखिन्छ। किनकी दिमागको सक्रियता निकै बढेको हुन्छ।बच्चाहरु आफ्नो निन्द्राको झण्डै ५० प्रतिशत समय REM चरणमा बिताउँछन्। तर वयस्कको REM चरणको अवधि पुरा निन्द्राको मात्र २०% हुन्छ
प्रकाशित मिति ३ श्रावण २०७७, शनिबार १५:४१